Mpisehatra amin’ny zavakanto : hanofana matihanina ny Craam | NewsMada
Mpisehatra amin’ny zavakanto : hanofana matihanina ny Craam
Toy ireo foibe sy rafitra hafa mpanentana ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina eto an-dRenivohitra, mbola mangingina ny eny amin’ny Craam*, eny Ankatso, hatramin’izao. Efa iaraha-mahalala ny antony: ny fihanaky ny pesta. Na izany aza, efa mipetrapetraka ihany koa ny fandaharam-potoan’ireo hetsika karakarainy, manomboka amin’io volana novambra io. Fotoana izay inoana fa mba hiverenan’ny zava-drehetra amin’ny laoniny.
Fantatra àry fa mikarakara fiofanana ho an’ny mpanakanto sy ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto ity foibe ity, manomboka ny 20 novambra izao. Misy sokajy telo ny fiofanana: ny mahakasika ny fitantanana ireo tetikasa ara-kolontsaina, ny fandrindrana hetsika zavakanto ary ny fiofanana momba ny fomba fiantsehatra.
Tanterahina eny amin’ny Craam ny sokajy voalohany raha eny amin’ny AFT Andavamamba ny faharoa ary etsy amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo ny fahatelo. Miara-manomboka ireo fiofanana ireo. Nomarihin’ny mpikarakara fa mbola misokatra ny fisoratana anarana amin’ireo fiofanana ireo, hatramin’ny 2 novambra izao. Voafetra ho 12 isaky ny sokajy kosa anefa ny mpiofana.
Miara-miasa amin’ny Iomma** ny Craam amin’ny fikarakarana ity fiofanana ity. Mpampiofana manampahaizana avy atsy La Réunion no hizara ny traikefany mandritra io hadimiana io.
* Craam: foibe momba ny kanto ankehitriny eto Madagasikara
** Iomma: tsenan’ny mozika aty amin’ny ranomasimbe Indianina